Abesifazana Bakhuthaza uYes Vote kuReferendum
Friday, February 12, 2016 Local time: 05:33
Udaba lukaMavis Gama lwabesifazana abakhuthaza uYes vote kuReferendum
HARARE— Inkokheli zabesifazana zikhuthaza uzulu ukuba avote esemakukela ugwalo olukhangelelwe ukuba yisisekelo sombuso esitsha kukhetho lweReferendum. Lokhu kuphume kungxoxo phezu kwesisekelo sombuso eyenzelwe eQuill Club eNew Ambassador Hotel ngolweSine kusihlwa.
Lumhlangano uyingxenye yenhlelo eziqoqwe ngabesigodlo sommeli weMelika eZimbabwe kuhambelana lokunanza ilungelo labensundu elizweni lakhe ngayonale inyanga kaNhlolanja kuhlelo lwe “Black History Month ‘. Kuqakathekiswa imisebenzi yabesifazana bonsundu abadumileyo ngokulwela ilungelo loluntu lenguquko abafana loNkosikazi Rosa Parks wase Montegomery e Alabama owamelana lokubandlululwa kwabensundu ngeminyaka yabomasixties. UParks ubikwa engazange asebenzise udlakela ngesikhathi esala ukusukumela omhlophe ebhasini.
Injongo yalomhlangano owenziwe phansi kwesihloko esithi “ The Legacy of Rosa Parks:Women & Non-Vviolent Strategies of Social Change ” ngeyokubonisana ukuba omama labo balakho ukuphatha umsebenzi wokulwela ilungelo loluntu lekuletheni inguquko emazweni abo kungekho dlakela. Kubika intathelizindaba yeStudio 7 uMavis Gama eseHarare.
Udaba lukaMavis Gama lwabesifazana abakhuthaza uYes vote kuReferendumi